The OnePlus 8 Pro na-adịgide ndụ JerryRigEle ule siri ike nke ihe niile | Gam akporosis
OnePlus 8 Pro na-adịgide ndụ JerryRigEnwale siri ike ọ bụla siri ike
Nyaahụ anyị tụlere mwepụta nke ọhụụ ọhụrụ OnePlus flagship, nke mejupụtara ya OnePlus 8 na 8 Pro, ọnụ abụọ a na-ewerela dị ka otu n'ime ihe kachasị mma n'afọ a, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ ka dị ogologo ụzọ ga-aga tupu ya agwụ.
Ngwaọrụ abụọ a nwere nkọwapụta teknụzụ dị elu na ogo. Na Snapdragon 865, nke kachasị mma ma dị ike ikpo okwu mkpanaka sitere na Qualcomm, bụ nke na-ebi n'ime ụdị abụọ ahụ. Ha nwekwara ihuenyo 90 na 120 Hz, yabụ ọdịnaya dị na ndị a gosipụtara n'ụzọ na-aga were were nke anaghị ahụ n'ahịa. Ma njirimara ndị a na-esonyere nguzogide kwesịrị oke ọnụ ahịa nke ngwaọrụ ahụ (karịa 1.000 euro na ụdị ya kachasị ọnụ)? Azịza nke a bụ ihe youtuber JerryRigEverything ahapụ ihe ọmụma ọha na eze na gị ngwaọrụ nnwale ule vidiyo.
JerryRig Ihe niile na-anwale nguzogide nke OnePlus 8 Pro
N'ime oge dịkarịrị obere karịa 6 nkeji, youtuber a ma ama na-ekpughe nlanarị nke ọkọlọtọ ọhụrụ ahụ na ule siri ike nke na-akpata nrụgide dị ukwuu na ekwentị mkpanaaka.
Na ihe a na-ahụ anya, ọnụ na Corning Gorilla Glass 6 na ihe ndị na-ewu ewu na-egosipụta ọkụ, ule na-agbanwe agbanwe, na ihe ndị ọzọ, bụ nke ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị njọ na nke ọ bụla n'ọnọdụ ndị a, yabụ ọ bụ ihe ziri ezi iji chọpụta na ịdịte aka ya bụ otu n’ime njirimara ya kacha mma.
N'otu aka, Nsonaazụ nke OnePlus 8 Pro na ule ahụ nwere ezi uche. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ntakịrị ihe anyị tụrụ anya ya. Ka anyị buru n'uche na ọnụahịa nke ama ama a na-amalite na 900 euro, nnukwu ego nke ọ bụghị naanị onye ọ bụla nwere ma ọ bụ nke ihe karịrị otu agaghị adị njikere ịkwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus 8 Pro na-adịgide ndụ JerryRigEnwale siri ike ọ bụla siri ike
Samsung kwupụtara Galaxy Tab S6 Lite ọhụrụ na weebụsaịtị ya